BARO WAX WALBA OO KU SAABSAN DARYEELKA HABBOON IYO BEERITAANKA QAANSO MADAXTOOYADA! - BOW
Qaanso qurxinta. Qalabka iyo daryeelka saxda ah
Qaanso qurxinta (Allium) waxaa lagu beeray beerta quruxda quruxda, waa mid u dhow, si uu u hadlo, qaraabo ah toon iyo basal, oo la baddalay by taranta. Dunida waxaa jira qiyaastii 600 nooc oo basbaas ah. Basasha waa la cunaa, ubaxkuna waa ay ku faraxsan yihiin. Kuwani waa ubaxyo aan qabyo ahayn oo ubax ah muddo dheer.
Qaanso qurxinta on ubaxa waxay u muuqdaan xarrago iyo xarrago leh. Intaa waxaa dheer, naqshadeeyayaasha muuqaalku waxay isticmaalaan inay qurxiyaan beeraha. Sababtoo ah midabka ubaxa leh dhammaan midabada qaansoroobka, waa wax aad u fiican abuurista ubax.
Wakhti dheer ayuu bararayaa, ku dhawaad ​​laba bilood. Qaanso qurxinta waxay si fiican u koraan looska, poppies, irises. Sidoo kale, sida bouquet sida istaagi doonaa ubax ah muddo dheer.
Waxa kale oo xiiso leh in laga akhriyo beerashada baradho xilliga jiilaalka.
Qaanso qurxinta: noocyo iyo noocyo
Qaanso qurxinta oo loo qaybiyey dhowr nooc. Kuwani waa eelemeroids in ubaxyada guga iyo xagaaga, iyo inta kale inta ka dhiman yihiin ku jira gobolka hurdo; iyo cuntooyinka alliums (chives).
Noocyada ugu caansan ee basasha ee koraan beerta waa:
Basasha Karatav waxay leedahay caleemo ballaadhan oo leh hooska buluug-cagaaran. Laguma cunayo. Waxay Blooms guga dabayaaqadii - xagaaga hore. Ubax oo ah midab casaan ayaa u eg baalal.
Basasha dahabka ah ubaxyada ubaxyada jaalle ah ee ku yaala bisha July, oo leh caleemo buluug ah oo qurux badan.
Ostrovsky qaansada waa midka ugu quruxda badan leh ubaxyo casaan-guduud ah, ubaxa waxay u eg yihiin kubad weyn.
Chives ugu caansan. Waxaa lagu beeray waddada. Tani waa warshad dilka ah oo leh ubaxyo casaan cirro leh, mararka qaarkood guduud, taas oo u eg dallad. Waxay isla markiiba u dhaqantaa sida ugu dhakhsaha badan ee barafka dhalaalayaa.
Florescences ee basasha jaalle ah waxay u eg yihiin dalladaha yar yar, iyo ubax - dawanno yaryar.
Dalka hooyo ee basal-wareega ah waa Cafaasus. Sida caadiga ah Bloom ee August. Ubaxa waxaa lagu rinjiyeeyaa midabka jilicsan ee jilicsan oo leh hooska lilac. Qaabka qaabka inflorescences wuxuu u eg yahay oval. Ha ka cabsanin dhaxan yar.
Allium Blue waa nooca ugu jecel ee qaansada in naqshadeeyaha dhulka loo isticmaalo. Midabka ubaxa - si tartiib ah buluug. Caleemaha waxay bilaabaan inay baxaan sida ugu dhakhsaha badan ubaxa koowaad. Waxaa mararka qaarkood loo yaqaanaa boqortooyada.
Sida loo doorto meesha saxda ah ee soo degta
Qaanso qurxinta wuxuu qurxin doonaa meel kasta oo magaalada ku taal, ama waddada beerta. Waxaa lagu beeray dheriga balakoonka. Ma jiraan shuruudo adag oo lagu dooran karo meel. Waxa ugu muhiimsan in ay ahayd qoraxda. In hooska waxaa lagula talinayaa in la beero noocyo kala duwan sida gadhka, hooskii geedaha casriga ah iyo geedo midho leh ayaa ugu haboon.
Carrada ayaa ugu fiican in ay doortaan dhexdhexaad leh biyo mareeno wanaagsan, si dhirta loo helo oksijiin ku filan. Waxaad u baahan tahay inaad doorato dhul bacrin ah. Isku day inaadan ku qanacsanayn inaad waraabiso, sababtoo ah nalalka dhirta ma aha mid aad u jecel qoyaanka.
Basasha waxaa lagu beeray abuur iyo nalalka. Seeds Bloom on labaad ee ka dib soo degay dhulka. Allium wuxuu awoodaa in uu ku koro hal meel, iyada oo aan ku-tallaalid, dhawr sano. Waxaa lagu talinayaa in la soo saaro iyo geedo ku-tallaalid, haddii ay duurka u koraan aad u cufan.
Waannu beeri karnaa qaanso madaxtooyada waa sax
Ka hor intaan la dhicin qaanso madaxtooyada dhulka waa in dhulka lagu diyaariyo. Goobta ayaa la qoday, sidaas darteed tayada saafiga ah ayaa sare u qaadaysa.
Markaas waxaa lagama maarmaan ah in la buuxiyo dhulka oo leh compost rotted, ku darso bacriminta macdanta, kaas oo ka kooban wax badan oo microelements. Waxaa sidoo kale faa'iido leh in bacrimiya ciidda leh potassium, waxay leedahay saameyn togan ku on geedka. Qaar badan oo potassium ah ayaa ku jira ash alwaax.
Beerta Allium ayaa lagu talinayaa dayrta, tobanka sano ee sanadka Sebtembar. Guluubku waa inuu haystaa wakhti ay ku qaadaan xididada oo si adag u "qabtaan" carrada. Laakiin noocyo kala duwan oo basasha ayaa lagu beeray dhulka guga. Dhammaan waxay kuxirantahay marka caloolxumadu ay barbar socdaan. Noocyo kuwaas oo bilaabaan inay Bloom ee May, lagu taliyey in ay ku beeri dayrta, iyo kuwa August - guga.
Qodobka ugu muhiimsan ee basasha beerto waa: qoto dheer ee godka waa in la siman yahay dhererka saddexda nalalka. Basasha yaryar waxay fadhiyaan meel ka badan basasha waaweyn. Ka dib markii beerashada basasha, waa lagama maarmaan in la sameeyo mulching ee ciidda, si ka samaysan compost ama peat.
Mararka qaarkood, ka dib dhamaadka xilliga ubax, nalalka waxaa laga qoday dhulka, gaar ahaan haddii ay tahay qoyan iyo qabow. Markaas waa in la qalajiyaa oo lagu kaydiyaa qol hawo qalalan leh heerkul ah 20 darajo. Sidaas darteed nalalka ma ururiyaan qoyaanka inta lagu jiro kaydinta, waxay ku shubi karaa sida balka.
Daryeel qaanso madaxtooyada aad u fudud. Basasha jarjaran, waraabinta waqtigeeda iyo qoyaanka iyo quudinta. Dhirta waxaa la waraabiyaa kaliya markay jiraan kuleylka qiyaas ahaan afartan sano ka baxsan, iyo dabeylaha kulul ee hawada kulaalaya.
Allium waxaa la quudin jiray guga, marka caleemaha ugu horeeya muuqdaan, bacriminta, taas oo ka kooban waxyaabo badan oo macdanta. Iyo xilliga dayrta - bacriminta leh content ee fosfooraska leh potassium, kaas oo si taxadar leh lagu aaso dhulka. Marmarka qaarkood basasha, ubaxyo jilicsan, ayaa la quudin karaa inta lagu jiro muddada firfircoon ee budheynta.
Nalalka, si looga ilaaliyo qoyaanka xad-dhaafka ah, waa la qodayaa marka caleemuhu si buuxda u qalalan yihiin miraha ay u bislaadaan. Waxay ku kaydsan yihiin sanduuqa kartoonka ama sanduuq alwaax ah. Waxaad u baahan tahay inaad doorato meel leh hawo wanaagsan. Haddii, si kastaba ha ahaatee, waxaad leedahay carrada caadiga ah, ka dibna basasha ayaa ka tagay aqalka jiilaalka ee bannaanka furan.
Dib u noqoshada qaanso madaxtooyada ku hawlan 4 sano oo kasta. Marar badan way ku talin waayeen, maaddaama buulku si xooggan u korayo, muuqaalka qurxinta ayaa hoos loo dhigaa. Ma jebin kartid caleemaha qallajinaya, si ay u qariyaan xaqiiqda, waxaa lagu beeray geedo caawiya oo qarinaya cilladahan.